May 2020 - Puntland Mirror Believable Media Website
May 31, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan lix qof ayaa dhimatay maanta oo Axad ah kadib markii gaari bus ah uu la qarxay miinada dhulka lagu aaso meel u dhow Muqdisho, sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters, […]
Somalia will push ahead with plans to hold presidential and parliamentary elections in early 2021, removing doubt that it will delay the vote because of the spread of Covid-19. “Holding a timely election is more important than […]
May 30, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Xubno katirsan isimada Puntland ayaa bilaabay dadaalo ay ku soo afjarayaan khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa, sida ilo-wareedyo ka ag dhow odayaasha ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Isimada […]
May 29, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Khamiistii ansixiyay ku noqoshada miisaaniyada 2020, taasoo la kordhiyay $35 boqolkiiba. Guud ahaan kharashka miisaaniyadda la ansiiyay ayaa dhan $646.9 milyan oo ka kooban kharashaad mashaariic iyo […]
May 27, 2020 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Wasiiro katirsan Puntland iyo Galmudug ayaa maanta oo Arbaco ah kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Kulanka ayaa looga wadahadlay sidii labada maamul ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo […]
May 25, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Xubno katirsan golaha wasiiradda ayaa maanta oo Isniin ah xafiiska loo dhaarshay. Dhaarinta ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada, halkaas oo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Xubnaha, oo ay […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland Minister of Environment, Agriculture and Climate Change has died after contracting COVID-19. Ismail Diriye Gama-did, died in hospital in Mogadishu in the early hours of Monday, the ministry said in a statement […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirkii Deegaanka, Beeraha iyo Isbadalka Cimilada Dowladda Puntland ayaa u geeriyooday xanuunka coronavirus. Ismaaciil Diiriye Gamadiid ayaa ku dhintay isbitaal kuyaala Muqdisho saacadii hore maanta oo Isniin ah, sida wasaaraddu ay ku sheegtay […]
May 23, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa isbadal ku sameeyay golihiisa wasiiradda fiidnimadii Jimcada. Madaxweynaha ayaa xilka ka qaaday wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Faarax Cawaash iyo wasiirka warfaafinta Cali Sabaray. Deni ayaa sidoo […]
May 21, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaaradda Cadaalada iyo Diinta & Awqaafta Puntland ayaa joojisay Jamaacada Salaada Ciida, waxayna ku amartay dadka in ay guryahooda ku tukadaan, taasoo qeyb ka ah hababka lagula dagaalamayo xanuunka coronavirus. Dabaaldega Ciida ayaa […]